Anarchy Linux: Andohalambalo mampiodina | Avy amin'ny Linux
Rehefa afaka kelikely, tsy nanova ny distro tamin'ny solosainako noho ny fitsapana kalitao izay ataonay amin'ny fitaovana loharano misokatra isan-karazany, nahita ny iray amin'ireo distro tianao hapetraka aho satria tsy mila manao zavatra firy ianao ataovy izay napetraka sy voalamina tsara mifanaraka amin'ny ilainao.
Anarchy Linux dia fantatra amin'ny hoe Arch na aiza na aiza fa noho ny olan'ny zon'olombelona miaraka amin'ny Arch dia tsy maintsy nanova ny anarany izy ireo, maivana tokoa ny distro ary manana installer somary mandroso izay manome antsika ny fahaizana mametraka rindrambaiko isan-karazany mora sy haingana.
Tsara ny manonona izany Anarchy Linux dia miorina amin'ny Arch Linux fa tsy manohana ny kinova ho an'ny ray aman-dreny, nozaraina ho Architecture 32-bit sy 64-bit, miaraka amin'ny kinova cd mivantana izay mamela antsika apetraho ny kinova desktop sy ny server an'ny distro ao amin'ny miovaova sy miovaova LTS.
Ity fanadihadiana manaraka ity dia hita ao amin'ity horonan-tsary manaraka ity:
2 Famaranana momba Anarchy Linux
Anarchy Linux manana tanjona fanavaozana izao tontolo izao amin'ny fitondrana distro haingana sy haingana amin'ny herin'ny Arch Linux, dia notorontoronina izy io mba ahafahan'ny mpangataka, ny mpikaroka ary ny manam-pahaizana manam-petra ambany takiana amin'ny solosaina rehetra. Anisan'ireo mampiavaka indrindra an'ity distro ity azontsika tononina:
Miorina amin'ny Arch Linux
Installer mahery izay mamela anao handamina ny toetran'ny distro anao hatramin'ny voalohany, miaraka amin'ny mety hisafidianana ny mpizara tahiry, ny kernel tianao hapetraka, ny programa fototra, ny toerana, ny tontolon'ny birao, ny mpampiasa ary koa mamela ny fanaraha-maso tsara ny fizarazarana.
Ny biraon'ny desktop sy ny mpizara an'ny Anarchy Linux dia azo apetraka.
Azo atao ny mametraka tontolo birao marobe (Budgie, Kanelina, Gnome, Openbox ary xfce4).
Mitahiry fitoeram-bola miaraka amin'ny rindranasa notazonin'ny ekipa fampandrosoana distro.
Afaka misafidy ny hametraka fampiharana isan-karazany zaraina amin'ireto sokajy manaraka ireto izahay: Audio, Database, Games, Graphics, Internet, Multimedia, Office, Programming, Terminal, Text Editors ary Servers.
Azo atao ny mametraka automatique fametrahana LAMP, LEMP, apache, nginx, bind, opensh server sns.
Azonao atao ny manamboatra ny fidirana ssh, ftp ary apache avy amin'ny fametrahana.
Famaranana maivana, miaraka amina loko mahafinaritra sy miaraka amin'ny menio fampiharana azo antoka sy azo ampiharina.
Izy io dia misy karazana fanamboarana bibikely distro, fanavaozana, patch patch, ary tahiry fanampiny.
Fanohanana ireo kapila sy fitaovana maro.
Ny lisitra iray amin'ny antsipiriany misimisy kokoa momba ny endrik'ilay fampiharana dia mety ho hita Eto. Azontsika atao koa ny mijery galerin'ny dingana fametrahana etsy ambany:
Famaranana momba Anarchy Linux
Maivana ity distro mahery ity, tiako manokana satria mpanaraka ny filozofia Arch aho ary ny distro azy, manana fanohanana amin'ny maritrano sy ny fitaovana isan-karazany izy, miampy ny fametrahana azy miaraka amina tontolon'ny birao.
Ny installer-ny dia manana rindranasa marobe izay raha ny amiko dia namela ahy hanana distro miasa tanteraka aorian'ny fametrahana azy, satria afaka hatramin'ny voalohany no nametaka ny mpizara LAMP, ny fidirako ssh ary mameno azy ireo miaraka amina andiana fampiharana izay ampiasako matetika.
Tsy nila nametraka zavatra hafa noho ny natolotry ny installer ahy aho, izay heveriko fa teboka tena lehibe, amin'izao fotoana izao dia tsy nisy tsy fahombiazako ary tena mivaingana ny zava-bitany, koa raha tianao ny Arch ity Tokony ho distro tsy maintsy andramana izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Anarchy Linux: Archive Revolutionizing
Azonao atao ve ny manondro bebe kokoa?
penguin hafa dia hoy izy:
Mamaly penguin hafa
Fantatro izany fizarana izany tao amin'ny fantsona Elav System Inside ary io no distro KDE tiako indrindra. Milamina tanteraka ary miaraka amin'ireo fanavaozana farany an'ireo rindrambaiko napetrakao.
Ny fametrahana azy dia azo ekena tanteraka ary izay ilainao ihany no apetrakao.
Markuss dia hoy izy:
Eny, na dia mitady aza aho dia tsy hitako ny kinova fametrahana 32 bit.
Raha azo atao ny manondro ny rohy fampidinana dia tiako izany. Nanandrana ny kinova taloha na avy aiza aho
(Bits 32) ao amin'ny VirtualBox fa manome lesoka kosa rehefa mitady fonosana.
Valio i Markuss
Hitako ity rohy ity hampidinana ny kinova roa. Heveriko fa hanana ny kinova 32 sy 64 kely izy saingy mbola tsy nandramako:
Lazao amiko ny fahasalamanao raha manana an'io kinova io ianao.
Misaotra betsaka an'i César, fa te hanandrana ilay kinova 32-bit an'ny Anarchy Linux aho, fa tsy ny kinova Archlinux izay napetrako taloha tao amin'ny PC taloha.
Ao amin'ny tranokala Anarchy no hany zavatra novakiako dia ny fanohananany lozisialy 32-bit, saingy tsy hitako ny fametrahana iso ho an'io maritrano io. Azoko an-tsaina fa toy ny Arch ihany koa izy ireo hitsahatra tsy hamoaka ireo kinova ireo.
Alejandro Urrutia dia hoy izy:
Ny filozofian'i Arch dia tsy natao ho an'ny olon-drehetra, fa ho an'ireo izay mahavita mametraka azy io, izany no zava-dehibe momba ny andohalambo izay azonao atao ny misafidy hametraka ary tsy ao amin'ireo kinova «» clones tsy azonao ananana izany. hametraka zavatra fanampiny fanampiny izay tsy ilainao akory no hipetrahanao. ho an'izay dia misy distros toy ny ubuntu izay natao ho an'ireo natomboka. Ary koa inona no hitranga rehefa tsy mahomby ny fonosana iray ary latsaka ao anatin'ny tontolon'ny sary (ny filozofia dia ny manana ny fonosana farany sy haingana indrindra) fa izany dia mitarika tsy ho tsara sy maharitra foana.
Na aiza na aiza misy klone tsipika tsotra misy dingana fametrahana efa voafaritra (tsy mandeha intsony izy io, tsy alaina ny fonosana). Heveriko fa ity distro ity dia ho an'ny very izay tsy hahalala izay hatao raha sendra misy corduroy manjo azy ireo. Aleo tsy fehezina ary mampiasa ubuntu.
Valiny tamin'i Alejandro Urrutia
Manuel Alcocer J. dia hoy izy:
Valiny tamin'i Manuel Alcocer J.
Samuel Diaz dia hoy izy:
Salama, inona no mahasamihafa ny Arch Linux sy Anarchy Linux?
Valiny tamin'i Samuel Díaz
Manazava ny hevitra ...
Lahatsoratra iray fotsiny no hitako momba ilay distro Anarchy Linux vaovao izay nilazana fa nozaraina ho an'ny maritrano 32-bit. Gaga aho ary te hanandrana azy nefa tsy nahomby, dia izay ihany. Manana PC taloha aho ary tiako ny hizaha toetra distro azy.
Ataoko voalohany ao anaty Virtualbox izy ireo ary raha mahasarika ny saiko dia mankany amin'ny PC izy ireo.
Izaho dia efa nametraka Archlinux, Fedora, Debian ary na dia FreeBSD sy Gentoo aza dia napetraka tamin'io pc taloha io. Ireto distro roa farany ireto dia toa somary misavoritaka ihany ny mametraka azy (farafaharatsiny ho an'ny ambaratonga misy ahy) na dia tsy misy tsy voavaha amin'ny famakiana sy ny fitadiavana vahaolana amin'ny tranonkala, fa toa tsy sarotra apetraka akory i Archlinux. Betsaka ny fampianarana sy fampahalalana momba an'io.
Izany dia nilaza fa inona no ataon'ny mania "elitists" amin'ny filazany amin'ny olona izay tokony hatao na tsy tokony hatao,
inona no tsara ary inona no tsy sns ... Inona koa no homen'ny fizarana ampiasain'ny olona anao? Avelao izy ireo hanandrana amin'izay tiany.
Ho an'i Samuel Díaz ...
Raha ny fahalalako azy, Archlinux dia napetraka mifototra amin'ny baiko avy amin'ny console ary mahazo fametrahana kely ianao, izany hoe, rehefa tafapetraka ny rafitra dia tsy maintsy apetrakao ny birao irina (Gnome, KDE sns ..) ary ny rindranasa rehetra , mpamily sy fisie ilaina.
Miaraka amin'ny Anarchy (interface interface) dia manisy marika ny zavatra tianao hapetraka ianao, ao anatin'izany ny fampiharana isan-karazany.
Ireo distros ireo dia mamoaka ny fahasoavana sy ny dikany amin'ny Arch, izany hoe ny fametrahana farafahakeliny ary mianatra kely momba ny fomba hahazoana tanana amin'ny fanaovana boky.
Alohan'ireny distros ireny dia aleon'ny Fedora na Ubuntu, tsotra kokoa ho an'ny mpampiasa farany ary marin-toerana.
Raha ny tokony ho izy, Markus, FreeBSD dia tsy distro Linux, raha ny marina, tsy mampiasa ny kernel Linux izy io, OS feno mifototra amin'ny BSD izy io.
Fanazavana farany (tsy te-hanohy amin'ity lohahevitra ity aho).
Anonyme, tsy miteny aho na aiza na aiza fa linux FreeBSD, nolazaiko izy hanasongadinana ny fahasarotan'ny fametrahana azy, tsy misy hafa.
Mety marina ny anao momba ny "dikan'ny Arch", raha ny tena izy tamin'ny nametrahako azy voalohany, iray amin'ireo tanjoko ny hahafantatra bebe kokoa ny zavatra ataony.
Satria fantatro fa samy manana ny heviny ny tsirairay ary tsy mikasa handresy lahatra an'iza na iza aho hieritreritra an'izany raha tsy izany dia hilaza fotsiny aho fa tsara ho ahy raha izay te hametraka Anarchy, Antergos, Manjaro, Namib sns ...
Apetraho ary ankafizo izany.
Azoko tsara ny toerana misy anao raha nanapa-kevitra tampoka ny hanampy fampiharana na installer ny ArchLinux, saingy tsy manaiky ny hitsikera ireo disro hafa aho satria mora ny mametraka azy ireo.
Mampahatsiahy ahy ny mpiara-monina iray izay tezitra tamin'ny fananana manontolo izy io satria rehefa lasa filoham-pokonolona izy ary voatery niady sy nitantana olana maro, ny ankamaroan'izy ireo dia nisafidy ny hanakarama mpitantana fananana, amin'izay nolalovany, ankehitriny ny hafa hanana izany mora foana ary tsy marina izany ...
Jorge MG dia hoy izy:
Niezaka ny nametraka azy aho fa rehefa tonga teo amin'ny fametrahana ny rindrambaiko dia naneho lesoka ary nofoanana ny fametrahana.
Amin'ny farany dia tsy maintsy mandeha amin'ny Arch madio aho, antenaiko fa ho voavahan'izy ireo ny olana satria tiako be ilay izy tamin'ny voalohany nampiasako azy.
Valiny amin'i Jorge MG
Fanovana revolisiona ??????
kadrianca dia hoy izy:
Betsaka no mitaraina momba ny mahavariana amin'ireo clone newbie sariaka ary ny marina dia na dia misy aza ny safidy hafa, satria tsy maintsy avelan'ny olona puritans hanaiky azy ireo fa manana zo tanteraka hampiasa an'io na io distro io satria hain'izy ireo ny mametraka azy io. tsikelikely sahady ny pulse (tsy misy fampianarana). Heveriko fa ireo olona manao ireo fork "tsotra" ireo dia tsy mieritreritra izay holazain'izy ireo momba ny Puritans fa ny mitondra karazana os mitovy amin'ny Linux amin'ny vondrona iray. Tsaroako tokony ho 4 taona lasa izay ny nahitako ny fampianarana be dia be indrindra momba ny fametrahana archlinux ary narahiko tamin'ny taratasy izany ary na dia izany aza dia nandà ny hametraka ny mpizara grafika ny tsindry ary tsy maintsy nisafidy mpanao mari-trano aho, teo aloha sy Ankehitriny miaraka amin'ny manjaro , Tiako ny archlinux (ny asany sy ny pacman mahafinaritra azy, izay heveriko fa manome daka betsaka apt sy yum) fa farafaharatsiny tokony hametraka mpiorina karazana klioba izy ireo ho an'ireo izay te-hametraka ny tena andohalambo raha tsy misy ny maharatsy ny fametrahana andohalambo
PS: miaraka amin'ireto farany dia tsy milaza aho hoe tokony handeha amin'izany lalana izany fa manokatra varavarana vaovao ho an'ireo izay te hahalala ny rafitra nefa tsy mandalo ny iray tampo aminy.
PD2: Heveriko fa ny distro izay manolotra karazana fametrahana maromaro (mafy: toy ny gentoo - mid: toy ny andohalambo - mora: toy ny slackware / debian kli - ary mora be: toy ny ubuntu / fedora) no distro azo antoka, satria maro hahalala azy ireo, maro no ho afaka hiara-hiasa ary hihena ny hantsakan'ireo mampiasa an'io na io karazana fametrahana ...
Mamaly an'i kadrianca
Izany no tranga manokana an'ny Anarchy, mpiorina CLI misy safidy isan-karazany raha misafidy ilay fanao mahazatra ianao. Ianao koa dia manana ny fahaizana mametraka ireo birao mahazatra (na dia tsy eo aza ny KDE) mora kokoa.
Manana anao ao amin'ity distro ity aho?
Mampiasa pamac-aur aho ho an'ny interface graphique, saingy afaka mametraka yaourt tsy misy olana ianao. Araka ny efa nolazaiko dia fizarana tena, tena azo ovaina.
Mampiasà anarchy, mametraka arch kde, ampahany tsara apetraka eo afovoany, safidy Anarchy advanced dia mamela ny fametrahana kde kely indrindra sy ny antsipiriany. Ny ratsy, ny fizarazaran-tànany, ny disk gpt, dia tsy nandrakitra fanovana sy fametahana notapahina. Andramo ny zava-drehetra. Tamin'ny farany dia namafana ny fizarazarana aho, tsy maintsy namerina, ary nampiasa fizarazarana mandeha ho azy, ny disk Linux rehetra no ampiasaiko. Tsy mampiasa dualboot aho. Tsy afaka nametraka andohalambo tamin'ny fomba oroka aho ary nanandrana in-3, tsy tokony halefa io, izany no nahatonga ahy hampiasa anarchy. Ary niriko i Arch, na dia naka fanahy ahy aza i Manjaro.
Miguel C. dia hoy izy:
Mpiorina toa an'i Architec na Archanywhere ve izy sa distro azo tanteraka toa an'i Manjaro, manadihady Anarchy ary toa mpametraka andohalambo madio io fa raha vao napetraka dia antsoina hoe Anarchy ao anaty boot, splash.png, vaovao, efijery sns. Tsy nanao izany i Archanywhere. Nametraka Arch ianao ary nilaza hoe Arch ... Tsy mihoatra ny fametrahana Anarchy amin'ny distro napetraka na dia installer aza. Manompo eny. Tsy afaka nametraka maody oroka andohalambo aho. Afaka nanao anarchy aho, ary tsy mila hanim-py. Andohalambo madio no tadiaviko. Raha apetrakao sy ovainao ny splash.png, syslinux.cfg sns ka milaza hoe Arch. Hanitsakitsaka ny fahazoan-dàlana hampiasana ve izany?
Valiny tamin'i Miguel C.
Ny fizarana dia nametraka azy omaly ary manana fampiasa maro izy, efa roa taona aho no nampiasa arko, ny lesoka ananany dia ny tsy fanananao safidy hisafidy ny rafitry ny file swap ho an'ny fifanakalozana, amboary ihany koa ny fizarazarana ary hamorona avy hatrany ny ifanakalozy raha ny teoria nampianarin'izy ireo ahy tany amin'ny lise.
Ataoko ny fametrahana azy manokana ary tsy mamorona partition swap ho ahy izy io. Angamba noho ny karazana fametrahana nofidinao.
Christian garcia dia hoy izy:
Sarotra amiko ny mahatakatra ny tanjon'ny famoronana distro miorina amin'ny Arch, raha toa ny mpampiasa afaka mametaka Arch tanteraka ary manana ny fahagagana rehetra mampanantena ireo distros ireo.
Fantatro fa mety ho somary mankaleo ny fametrahana azy, saingy mieritreritra aho fa ny fahalalana tsara ny fitaovanao dia efa manana antsasaky ny fametrahana ao am-paosinao. Ny ambiny dia ny famakiana ilay rakitra install.txt mitovy izay entin'ny iso ary izay ihany. Ao amin'ny toerana misy ahy dia matetika tsy mihoatra ny 10 minitra akory ny fananana rafitra fototra. Mazava ho azy fa takiana ny mijery ny wiki, mahay mampiasa pacman, ary antsipiriany hafa.
Mbola tsy nampiasa an'ireny fork ireny aho ary tsy dia tiako loatra izany, amiko dia be loatra izy ireo.
Ireo mpandraharaha ireo dia mety hiditra amin'ny fampandrosoana Arch ary hanatevin-daharana ny hery. Tsy mandà mpikirakira CLI / GUI mora mpampiasa kokoa aho, fa avia… tsy ratsy izany. Aza matahotra ny console. KISS.
Valiny tamin'i Cristian Garcia
Iza no mihevitra fa ny tena mampiavaka an'i Arch dia ny sarotra apetraka dia ny volan'olombelona, ​​amin'ny ankapobeny satria ny fananana fampianarana dia tsy fanamby tsotra akory. Ny zavatra tsara momba ny Arch dia ny repository miaraka aminy AUR ary afaka mametraka izay ilaina rehetra nefa tsy mila manokatra Internet browser.
Na izany na tsy izany, izany eritreritra izany dia indrisy, ilay manjaka kely indrindra nefa re matetika, mahamenatra. Ary teny an-dalana, mba hahafantaranao fa hieritreritra an'i Manjaro na Antergos koa ianao miaraka amin'ny eritreritrao mihidy mafy; Ary hametrahana ny famaranana, i Ubuntu dia mihodina, noho ny fahatsorany sy ny fitovizany ary koa ny fitoniana, hifindra amin'ny orinasa sy ny tontolon'ny orinasa, ary koa ny serivisy ho an'ny daholobe, ary noho izany dia manana ny London Underground ianao, ka manome kely ohatra.
Tsy nahomby ampy
Raha hitanao fa tsy mahafantatra ny fifandraisanao amin'ny Internet izy io, dia aza raharahianao ny fanangonana mpizara
na izany aza tsy nahomby mihoatra ny basim-borona
fa misy ny olona mametraka azy tsy misy olana
Manoratra ny tantaranao manokana amin'ny git